Aza Taitaitra Foana : Natao Hanampiana Ny Rosiana Ity ‘Bokotra Mena’ Ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Mey 2017 13:43 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, Italiano, Français, 繁體中文, English
“Bokotra Mena.” Pikantsary avy ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny fampiasa .
Sambany vao niditra mivantana ny fampiasa vaovao amin'ny finday ho an'ny mpanao hetsi-panoherana ao Rosia antsoina hoe “Red Button” (Bokotra mena) tamin'ny faran'ny volana Aprily. Azo nampiasaina ny fampiasa tamin'ny fotoanan'ny fihetsiketsehana ho an'ny mpanohitra an'i Putin tamin'ny 29 Aprily, izay nokarakarain'ny hetsika “Rosia Misokatra”, manana fikambanana mirahavavy aminy any amin'ny Fanjakana Britanika ary noràran'ny Minisiteran'ny Fitsarana Rosiana vao haingana .
Mikasa ny hanome fiarovana lehibe kokoa ho an'ny mpanao hetsi-panoherana tsy ho tratran'ny fisamborana sy ny sazy tsy ara-dalàna ny Bokotra Mena amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo voafonja amin'ny namany, ny fianakaviany, ary ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona amin'ny fomba haingana kokoa noho ny hatramin'izay .
Novolavolian'i Alexander Litreev, mamela ireo mpisera hitatitra ny fotoana sy ny toerana nitrangan'ny fisamborana ny rindrambaiko, ary avy eo izany dia mampahafantatra avy hatrany ny paositry ny polisy izay nihazonana azy ofisialy. Afaka misafidy mialoha ireo namana sy fianakaviana hampahafantarina avy hatrany ny zava-mitranga sy ny toerana misy ny paositry ny polisy ireo mpisera, ary manao tatitra ny fisamborana any amin'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ihany koa ny fampiasa, toy ny fampiasa mpiara-miasa OVD Info, izay afaka manome fanampiana ara-pitsarana ny tsirairay.
Ao amin'ny Twitter, mandefa ireo toerana misy ny fisamborana faobe ihany koa ny Bokotra Mena mandritra ny fihetsiketsehana lehibe, ary ahafahan'ireo mpanao hetsi-panoherana hafa midify ny “toerana mafampana.”
Rosia, St. Petersburg, Kronversky prospekt – fisamborana faobe .
Ao amin'ny bilaogin-dahatsoratra iray ao amin'ny Telegram, nilaza i Litreev fa tiany ho lasa “rafitra ho an'ny Rosiana rehetra mba hanaraha-maso ny fisamborana tsy ara-dalàna ny Bokotra Mena” sy ho sampan-draharaha mba hahazoana antoka fa tsy “miatrika samirery ny tsy rariny sy ny fandikan-dalànan'ny sampan-draharahan'ny mpampihatra lalàna” ireo mpanao hetsi-panoherana.
Nandritra ny fihetsiketsehan'ny anti-Potinina tamin'ny 29 Aprily, nanambara ny fisamborana voalohany tao amin'ny fihetsiketsehana tao Kemerovo ny Bokotra Mena, toerana nahitana farafahakeliny olona miisa 13 nosamborina. Tsy dia lehibe na niely patrana toy ny fanentanana hetsi-panoherana manerana ny firenena nokarakarain'i Alexei Navalny tamin'ny volana Martsa ny famoriam-bahoaka, kanefa voaporofo tsara ny asan'ny Bokotra Mena tamin'ny famoriam-bahoaka tamin'io andro io .
Araka ny tranonkala Meduza, nilamina sy tsy nahitana loza ny hetsi-panoherana maro manerana ny firenena, ohatra tao Novosibirsk sy Ufa, kanefa nisambotra olona maherin'ny 50 ny mpitandro filaminana tany St- Petersburg.
Tamin'ny 29 Aprily, nanana fahafahana ny hanao andrana ny fetran'ny fiarovana ao aminy ihany koa ny Bokotra Mena, ary nitatitra i Litreev fa nolavin'ny algôritman'ny fampiasa ireo fanairana faikany mihoatra ny 270 .
Nilaza i Litreev fa ho avy ny voatra tsara kokoa amin'ny rindrambaiko, alohan'ny famoriam-bahoaka faobe amin'ny volana Jona izay kasain'i Alexei Navalny hatao ary antenainy hamerenana ny fahombiazany tamin'ny volana Martsa nandritra ny fihetsiketsehana manerana ny firenena tamin'ny Fetim-pirenena Rosiana.
Tamin'ny alarobia 3 May, nandà ny fampakaran-draharaha nataon'i Navalny tamin'ny raharaha fanamelohana mikasika ny fanodikodinam-bola ny Fitsarana Avo Rosiana, nahatonga ny sakana tsy ahafahany filatsahana hofidiana. Nilaza i Navalny fa hanohy ny fanentanany amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy na izany aza, nilaza ihany koa izy fa tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ny lalàna federaly izay mandrara ny firotsahany hofidiana .
Tena fanamby tsara ny fikasany hanao fihetsiketsehana faobe maro kokoa aorian'ny volana Jona, ary ny fotoana no hilaza ny habetsahan'ny mpanohana azy izay mila fampiasana ny bokotra mena.